कसले खोस्यो बाबुराम भट्टराईको अध्यक्ष पद ? यस्तो रहेछ भित्री कहानी — Motivatenews.Com
कसले खोस्यो बाबुराम भट्टराईको अध्यक्ष पद ? यस्तो रहेछ भित्री कहानी
काठमाडौं – तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र समाजवादी पार्टी मिलेर बनेको जनता समाजवादी पार्टीको वरियता विवाद सतहमा आएको छ । निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्न भन्दा अघि तीन जना अध्यक्ष हुने भनेर सहमति भएको भएपनि बाबुराम भट्टराईको लिडेढिपीका कारण उनको अध्यक्ष पद खोसिएको छ ।
पार्टी दर्ता गराउन आइतबार साँझ पाँच बजेपछि जसपाका शीर्ष नेताहरू कान्तिपथस्थित निर्वाचन आयोग कार्यालय पुगेका थिए। पार्टी दर्ताका लागि निवेदन दिएको ४५ दिन पुगिसकेकाले उनीहरूले आजै पार्टी दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता थियो।
जनता समाजवादी पार्टीका नेता शिवजी यादवले दुई अध्यक्ष र तीन जना बरिष्ठ नेता रहने गरी पार्टी दर्ता भएको जानकारी दिए। सुरूमा पार्टीमा एक जना संघीय परिषद् अध्यक्ष र दुई जना केन्द्रीय परिषद अध्यक्ष हुने छलफल भएको थियो।